DHAGEYSO: Munaasabad lagu caleemo saarayo guddoomiyaha ciyaaraha xaafadda Kooshin oo lagu qabtay Baladweyne – Wakaaladda Wararka Hiilnews
DHAGEYSO: Munaasabad lagu caleemo saarayo guddoomiyaha ciyaaraha xaafadda Kooshin oo lagu qabtay Baladweyne
Jimco, Marso, 01, 2019 (HNN)- Munaasabaddan oo aheyd mid lagu caleemo saarayay guddoomiyaha ciyaaraha xaafadda kooshin ee magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka qeyb galay khuburo dhanka ciyaaraha ku xeel dheer, iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha ciyaaraha xaafaddda Buundo weyn iyo wakiilo matalay xaafaddaha kale ee Baladweyne oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa guddoomiyaha cusub ee xaafadda kooshin ku booriyay inuu ka soo dhalaalo waajibka saaran.
Guddoomiyaha ciyaaraha xaafadda Kooshin ee magaalada Baladweyne Axmed faarax cumar istuur ayaa sheegay in uu hormarin doono ciyaaraha xaafada kooshin isaga oo ka codsaday dhalinyarada kale in ay la shaqeyaan.
Warbixintan waxaa noo heysa Kowsar Khalif Cali.
DHAGEYSO: Munaasabad lagu caleemo saarayo guddoomiyaha ciyaaraha xaafadda Kooshin oo lagu qabtay Baladweyne added by admin on March 1, 2019